Useyashiya futhi emsakazweni waseKZN umethuli wezinhlelo kumabonakude | isiZulu
Usemisiwe umsakazweni umsakazi wodumo
Umsakazi usizwe yindodana ukucela intombi ukuba ibe umkakhe
Johannesburg – Inkakha yomsakazi ophinde abe ngumethuli wezinhlelo kumabonakude, uPhat Joe, useyayishiya i-East Coast Radio.
Lo msakazi, ochithe unyaka owodwa nje kuphela kulesi siteshi saKwaZulu-Natal, useyavalelisa ohlelweni lwantamba “ngenxa yezinto ezijabulisayo ezahlukene ezintsha asezinikele kuzo ngaphandle kwase-KZN.”
Ngaphambilini ngonyaka ka-2016 kwasabalala imibiko yokuthi uJoe uzoshiya uhlelo lwakhe olwalungena ekuseni kuMetro FM ngezimpelasonto kusukela ngo-05:00 - 09:00 ukuze ezojoyina i-East Coast Radio ukuzoshayela lolu hlelo lwantambama.
Ngokwesitatimende sabezindaba, lo msakazi kanye nabaphathi besiteshi bafinyelele esivumelwaneni sokuthi bangayivuseleli inkontileka yakhe.
OLUNYE UDABA: Usemisiwe umsakazweni umsakazi wodumo
“UPhat Joe usebambe iqhaza elibalulekile kwi-East Coast Radio ekushayeleni kwakhe uhlelo lwantambama, kodwa ukudingeka kwakhe ngapha nangapha sekufake ingcindezi enkulu kuyena,” sifundeka kanjalo isitatimende.
Umphathi wezinhlelo kwi-East Coast Radio, uZane Derbyshire uthi: “UPhat Joe ungomunye wabantu abahlonishwayo kwezikaqedisizungu eNingizimu Afrika, futhi yize noma ubudlelwano busheshe baphela, siyakuqonda ukudingeka kwakhe emisebenzini emisha.
"Uhlelo lwantambama lungolunye lwezinhlelo ezibalulekile esiteshini futhi lufuna ukuzinikela ngokugcwele kumuntu olwethulayo eThekwini. Singathanda ukufisela uJoe impumelelo ezinhlelweni ezintsha, ezizoqala maduzane. Usalokhu engumngani we-East Coast Radio.”
Ngokusho kwalesi siteshi, umshayeli omusha walolu hlelo uzumenyezelwa maduzane.
Ngale kokuba ngumsakazi, uJoe uphinde abe ngumethuli wohlelo losaziwayo kanye nemigosi kuSABC1, iThe Real Goboza, nokuwuhlelo olungena ngoMgqibelo ngo-19:30 kusihlwa.
A post shared by Majota (@therealphatjoe) on Aug 16, 2016 at 6:16am PDT